श्रीमान कलिला दुइ छोरा र श्रीमतीअंगालेर भक्कानिदा​ सबैका आँखा रसाए के देख्नु पर्यो यस्तो ? – Khabar Patrika Np
श्रीमान कलिला दुइ छोरा र श्रीमतीअंगालेर भक्कानिदा​ सबैका आँखा रसाए के देख्नु पर्यो यस्तो ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०२, २०७८ समय: २३:५४:१९
धादिङ जिल्ला हाल खनायोबास गाउँपालिका – ४ राउतेकि दुई सन्तानकी आमा २५ बर्षिया श्रीमाती अन्जना थापा मगर आर्थिक अभाब को कारण हस्पिटल बाट डिस्चार्ज हुन नसकेको र राम्रो उपचारको लागि आर्थिक अभाबले जीवन र म#रणको​ दो#साँधमा​ रहेको हुँदा सबैले सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।सहयोगको लागि मोबाइल नम्बर ९८४९८५७०८८
यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनुहोला साथै सकेको सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।।। यो समाचारको भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
यो पनि पढ्नुहोला भारतमा राजाकै सम्मान पाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हरिद्धारमा के गर्दैछन् ?
काठमाडौ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिवेला भारत भ्रमणमा छन् । उनी अहिले हरिद्वार महाकुम्भको निम्तो मान्न भारत पुगेका हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतमा राजाकै हैसियतमा भब्य स्वागत र सम्मान गरिएको छ । विभिन्न धार्मीक स्थलको अवलोकन भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आइतवार हरिद्वार पुगेका छन्।
त्यहाँ उनलाई निरञ्जनी अखडाका सन्तहरुले भव्य स्वागत गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्। निरञ्जन पीठाधीश्वार कैलाशानन्द गिरीको निमन्त्रणामा भारत गएका उनले हरिद्वारस्थित दक्षिणकाली मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेका छन्। त्यसलगत्तै ज्ञानेन्द्रले सन्तहरु र महामण्डलेश्वरसँग भेटघाट गरे। उनलाई भारतले दिएको सम्मानको नेपालमा पनि चर्चा भएको छ । नेपालमा पूर्वराजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई राजाकै हैसियतमा भारतले दिएको सम्मानको चर्चा भएको हो ।
पीठाधीश्वर गिरीका अनुसार ज्ञानेन्द्रले भोलि शाही स्नान गर्नेछन्। सोमवार हरिद्वारको अपररोडमा कुनै पनि सवारीसाधन चल्नेछैनन्। सोमवार र त्यसको दुई दिनपछि महाकुम्भमा शाही स्नान चल्नेछ।